आँचल जी बोलीको ठेगान राख्ने की ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
आँचल जी बोलीको ठेगान राख्ने की ?
फिल्मी फण्डा । म्युजिक भिडियोदेखी फिल्मसम्म फिट नायिका हुन् आँचल शर्मा । पछिल्लो समय नायक पल शाहसँग नाम जोडिएपछि आँचल थप चर्चाको विषय बनेको छ । आँचल शर्माले अभिनय गरेको पछिल्लो फिल्म ब्ल्याक रिलिज भईसकेको छ । ब्ल्याक व्यवसायिक रुपमा कमजोर फिल्म हो । त्यसअघि आँचलको फिल्म शत्रुगते रिलिज भएको थियो । जुन फिल्म बक्स अफिसमा अब्बल ठहरीयो ।
फिल्म ब्ल्याक चल्दै गर्दा आँचलले ठूलो कलाकारको जमात रहने फिल्म विशेष गरि कमेडी जनरामा निर्माण हुने र धेरै कलाकार हुनेमा आफुले नखेल्ने बताएकी थिईन् । उनले मिडिया माझ आफैले सो कुरा गरेकी थिईन् । तर अहिले आँचलले आफ्ना् त्यो भनाईलाई लात मार्दै फिल्म दाल भात गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । यस अघि त्यहि ब्यारनको शत्रुगते गरेर केही गल्ति गरेजस्तो धारणा प्रस्तुत गरेकी उनले पुन किरण केसी र मह जोडीले निर्माण गर्न लागेको दाल भात तरकारीमा काम गर्न लागेकी हुन् । आँचलले आफ्नै बोलीको बच्चन भने राख्न सकिनन् ।
यस अघि फिल्म दाल भात तरकारीमा स्वस्तिमा खड्का रहने कुरा थियो । स्वस्तिमाले कलाकारको भिडमा आफु हराउने भएपछि या स्क्रिप्ट चित्त नबुझेर हो फिल्म नगर्ने अवस्थामा पुगिन् । त्यहि फिल्ममा आँचल शर्मा रहने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको हो । फिल्ममा हरिबंश आचार्य, बर्षा राउत, विल्सन विक्रम राई, पुष्प खड्का लगायतको अभिनय रहने छ । फिल्म आगामी बर्षको बैशाख १३ गते प्रदर्शन हुने बताईएको छ ।